चीन कुटनीतिक सम्बन्धमा संसारकै पहिलो नम्बरमा, के छ अमेरिकाको अवस्था ? - खुल्ला संसार
चीन कुटनीतिक सम्बन्धमा संसारकै पहिलो नम्बरमा, के छ अमेरिकाको अवस्था ?
2019-11-30 /in समाचार /by admin
काठमाडौँ संसारभर सबैभन्दा बलियो देशका रुपमा रहन पुगेको चीन जुन पहिलोपटक कूटनीतिक पद नियुक्त गर्नमा विश्वकै अग्रणी मुलुक बनेको छ ।
अष्ट्रेलियाको थिङ्क ट्यांकले गरेको अध्ययनका अनुसार २०१९ मा चीनले विश्वव्यापी रुपमा २७६ दूतावास र अन्य प्रतिनिधि कार्यालयहरु स्थापना गरि अमेरिकालाई पछि पारेको हो । जसले बेइजिङको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचको चाहनामाथि प्रकाश पार्दछ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति शि जिनपिङ सत्तामा आएदेखि नै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोफाइल बनाउनमा विशेष जोड दिँदै आएको छन् जसकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरुमा बेइजिङ पनि केन्द्रमा परिरहेको छ । यसमध्ये शिको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई मानिन्छ ।
सो सङ्ख्या अमेरिकाको भन्दा तीन पदले बढी हुन जान्छ जसपछिको सबैभन्दा बढी कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देश फ्रान्स, जापान र रुस हुन् । चीन र अमेरिकापछिको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक शक्ति फ्रान्सलाई मानिन्छ ।
यसमा बेलायत भने ११ औँ स्थानमा पर्दछ । यस रिपोर्टले दूतावास मात्र नभएर कन्सुलेटको पनि गन्ति गरेको छ र अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार तथ्याङ्कले भू–राजनिितक पहुँचमा विभिन्न राष्ट्रहरुको शक्ति र कमजोरीबारे स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थात् चीनको कूटनीतिक पहुँच अमेरिका भन्दा माथि पुगिसकेको छ । पछिल्ला केही वर्षहरुमा चीनको कूटनीतिक उदय व्यापक बन्दै गएको छ । २०१६ मा मात्र यो अमेरिका र फ्रान्सपछि तेस्रो स्थानमा रहेको थियो र केबल २६७ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो ।
यसपछि २०१७ मा दोस्रो र २०१९ मा पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको हो । बेइजिङको नयाँ मिसन नै अहिले ताइवानसँग सम्बन्ध राख्ने देशहरुलाई लक्षित गर्नु रहेको पाइएको छ ।
हाल ताइवान भने ३२ औँ स्थानमा रहेको छ जसका विश्वभर केबल १५ दूतावास मात्र छन् भने १०७ वटा कूटनीतिक नियुक्ति रहेका छन् ।
यसरी चीन र ताइवान दुवैको विदेश नीति अन्र्तगत उनीहरुले ती देशसँग मात्र पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने गरेका छन् जससँग तिनको प्रतिद्वन्द्वीको कुनै सम्बन्ध छैन ।
तर सङ्ख्यामा जति ठूलो भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको निर्धारण कूटनीतिक सहभागीताको गुणस्तरले गर्ने बताइएको छ । सीएनएन
https://khullasansar.com/wp-content/uploads/2019/11/bv.jpg 326 435 admin http://khullasansar.com/wp-content/uploads/2018/03/Khulla-Sansar-2-300x242.png admin2019-11-30 11:31:002019-11-30 11:31:00चीन कुटनीतिक सम्बन्धमा संसारकै पहिलो नम्बरमा, के छ अमेरिकाको अवस्था ?
यसकारण अर्को बर्षसम्म मिडफिल्डर... नुवाकोटमा गरिमा धान फलेन १ करोड...